2021 waa ka soo wareegay wuxuuna inoo ahaa sanad adag dhamaanteen, sida suuqa iyo deegaanka bulshada.Si kastaba ha ahaatee, dadaalka wadajirka ah ee dhammaan shaqaalaha CRE, iibkayaga sannadlaha ah ayaa kordhay ku dhawaad ​​50% sannadkii hore.Ku faana!
Disembar 31, 2021, shirkadeena waxay qabatay xaflad weyn oo dhamaadka sanadka ah.
Mr. Chen Dong, madaxwaynaha ayaa khudbadii furitaanka xaflada ka jeediyay.
Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan bah-wadaagta lagu soo casuumay xaflada dhamaadka sanadka.Haddii aysan jirin taageero dhow, way ku adkaan lahayd CRE inay gaarto waxa ay maanta haysato.Waxaana rajeyneynaa inaan sii wadno iskaashigan weyn.
Waxaan nahay karti badan waxaana u tartamaynaa bandhigga bandhigga.
Qof kastaa wuxuu bixiyay ubax.Qosol ayaa hoolka xaflada ka dhacay.
CRE waa hal koox oo United ah.Ruuxa HAL KOOXDA wuu sii socdaa sababtoo ah qof kasta oo naga mid ah.Sidaa darteed, shaqaale badan oo heer sare ah ayaa lagu aqoonsaday xafladda dhammaadka sanadka.Hambalyo!
Ka dib 2021-kan hibada iyo guusha leh, aynu si wada jir ah u abuurno guulo badan 2022!